Wasiir Mukhtaar Xuseen iyo odayaasha dhaqanka Hiiraan ayaa ku heshiiyey afar qodob… – Hagaag.com
Wasiir Mukhtaar Xuseen iyo odayaasha dhaqanka Hiiraan ayaa ku heshiiyey afar qodob…
Posted on 4 Diseembar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa maanta Magaalada Beledweyne kula kulmay qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Hiiraan.
Kulanka oo ahaa mid uu dalbaday Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa looga hadlay, sidii lagu qaboojin lahaa xiisadda ka taagan Magaalada Beledweyne, ka dibna laga wadahadlo diidmada reer Hiiraan ka keeneen madaxtinimada Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle.
Beledweyne waxaa saakay ka dhacay iska horimaad u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda iyo maleeshiyaad deegaanka ah, waxaana xigay bannaanbax dhawr saacadood ka socday magaalada, iyadoo bannaanbaxa lagu diidanaa safar uu maanta Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ku taggi lahaa magaaladaasi.
Kulankan ayaa geba-gabadii waxaa laga soo saaray afar qodob. Qodobada waxaa ku jira qodob qeexaya in la joojiyay socdaalkii Madaxweyne Guudlaawe ee Beledweyne.
Akhriso qodobada ka soo baxay kulanka
1: In Wasiirka Arrimaha Gudaha uu ballanqaadayo inaanu Madaxweynaha Hirshabelle imaan doonin Beledweyne, inta xal laga gaarayo khilaafka jira iyo tabashooyinka ay reer Hiiraan qabaan.
2: In Dowladda Somaliya aanay Ciidamada Qalabka Sida u adeegsan doonin dadka reer Hiiraan ee saluugsan Dhismaha Hirshabelle-da cusub.
3: In Wasiirka Arrimaha Gudaha uu Odayaasha Dhaqanka ka dalbaday in ay dejiyaan xaaladda ka taagan Beledweyne, kana qayb qaataan sidii wadooyinka xiran loo furi lahaa.
4: In Odayaasha Dhaqanka ay Wasiirka Arrimaha Gudaha u soo gudbiyaan warqad ay kaga hadlayaan tabashooyinkooda ku aadan Dhismaha Maamulka cusub ee Hirshabelle, si uu u gaarsiiyo Madaxweynaha Qaranka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.